Deg Deg: Wasiir Yarisow oo Saxaafada u Aqriyay Go’aanka Gollaha Wasiirada ee Arinta Qalbi Dhagax…[Lama Filaan] | Badweyn.com
Deg Deg: Wasiir Yarisow oo Saxaafada u Aqriyay Go’aanka Gollaha Wasiirada ee Arinta Qalbi Dhagax…[Lama Filaan]
Sep 6, 2017 - jawaab
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya ayaa maanta warbaahinta kula hadlay Xafiiska Ra’isalwasaaraha kaddib kulan aan caadi ahayn oo ay golaha wasiirrada yeesheen.
Wasiirka ayaa Madasha ka aqriyay 10; Qodob oo ka soo baxay Shirka Golaha Wasiirrada oo ay ka mid tahay arrinta Qalbi-dhagax oo waayadii dambe aad loo hadal hayay.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in Wareejinta Qalbi-dhagax ay ku saxneynd islamarkaana ay fulineysay Heshiis labada dal horay u dhexyaallay waa Itoobiya iyo Soomaaliya oo khuseeyay amniga labada dal.
Wasiirka Warfaafinta oo qodobada aqrinayay ayaa sheegay in heshiiska labada dal ay ku jirtay in dal waliba uu dalka kale ka kaashado amaanka islamarkaana ka gacansiiyo wax ka qabashada ururrada ka dagaallama sida Al-shabaab iyo OLNF.
Wasiir Yariisoow waxaa uu yiri “Xukuumadda Soomaaliya “Qalbi-dhagax wuxuu ahaa Nin Argagixiso, Falal amni darro ahna uu ka shaqeynayay sidaas darteedna heshiis ay ku galeen soomaaliya iyo Ethopia in ay iskaashan dhanka Amniga ah”